Hake keke - Thermomix Mapepa | ThermoRecipes
Hove48 maminitsi4 vanhu
Dzimwe nguva kugadzirira kudya kwemanheru kune usimbe zvikuru. Unosvika wakaneta kubva zuva rakareba, haunzwe kuda kubika chero chinhu, hauzive zvekuita pakudya kwemanheru ... mhuri haina hanya kana kuti haipe pfungwa.
Ndinoda, kana ndine nguva, gadzirirai kudya kwemanheru. Saka kana nguva yekudya yasvika, ndinotofanira kudziya kana kuisa mapeji ekupedzisa.
Uye iyi ndeimwe yeaya mabikirwo ane zvakakosha zvimisikidzo zvatingaite mu jiffy. Iwe unongofanira kuisa muchoto uye ndizvo ... Uye zvakanakisisa pane zvose ndezvekuti mhuri yose inoifarira.
Chinhu chayo chikuru ndeye hake, a Hove chena, yakaderera mumafuta uye macalorie. Iyo inopa zvicherwa zvakaita se potassium, phosphorus uye magnesium. Chii yakanakira vana, kuti zvakaoma kuvaita kuti vadye hove, uye kunyange zvazvo chikafu ichi chine kirimu nechizi, chinoita kuti chiwedzere kufadza kwavari.
1 Hake Keke
Iyo yekubika yekugadzirira kudya kwemanheru pasina kunetsekana.
Nguva yekugadzirira: 30M
Kubika nguva: 18M
Nguva yakazara: 48M
400 g ye hake
200 g yemvura kirimu yekubika
3 maekisi (chena chikamu)
30 g mafuta
50 g yakachena chena chizi
Isu tinopisa huni kusvika ku200º nekupisa kumusoro uye pasi.
Isu tinoisa maekisi mugirazi, tinocheka 5 masekondi, kumhanya 4. Tinowedzera mafuta uye chirongwa Maminitsi mashanu, tembiricha 16º, kumhanya 90.
Wedzera kirimu, mazai, kirimu chizi, parsley, munyu, mhiripiri uye sanganisa Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 8
Isu tinoisa musanganiswa mundiro yekubheka, tinokanganisa hake pamusoro. Fukidza grated chizi, kusasa nemadiridziro emafuta uye isa kariki yakatemwa pamusoro.
Tinoisa muchoto uye tinoderedza tembiricha kusvika 180º. Tinobika kwemaminitsi makumi matatu.
Rumwe ruzivo - Pasta yevana vane miriwo uye prawns
Kwakabva - SmallRecetas Blog
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Mazai, Asingasviki 1 awa, Hove, Mapepa evana
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Hove » Hake Keke
Ah! Iyo inotonhorera sei kunge quiche isina mukanyiwa, ndinofanira kuyedza izvi pachangu.
Izvo zvinofanirwawo kuve zvinonaka neakakwenenzverwa cod kana kwete?
Ipfungwa yakanaka zvakadii
Mhoro Joaquin, ndinofara kuti unoifarira, nezve kuisa crumbled acalao, izano rakanaka. Inenge iri nyaya yekuiyedza, kana iwe ukaita shanduko ndiudze, kuti zvakazoitika sei.
Ndinoifarira, ndinoda maVhutu zvakanyanya, zvakare hazvitore nguva, sekutaura kwaJoaquin kuti ndichaiyedza nekodhi nekuti ini ndinofunga kuti hake ine flavour shoma. Chinhu chimwe chandisingade chizi, inonaka here? Iwe unogona here kutsiva chimwe chinongedzo pachayo?
Mhoro Carmen, nezuro, pachinzvimbo chekuwedzera creamy chizi, ndakawedzera dzinenge ina diki chezi kuimba yekupurazi, uye zvaive zvakanakawo kwazvo. Murume wangu haafarire chizi uye iyi mhando yekubheka inoifarira, ndinofunga haina kuravira senge chizi, ingave nyaya yekuyedza, sezvo ini ndaisakwanisa kukuudza kuti sei rumwe rudzi rwechinhu chinogadziriswa.
Mhoro kunaka kwechizi iyo iri mhando philadelfia? ndatenda zvinoita kunge zvinonaka
Mhoro compi yemabikirwo, ini ndinopinda muboka kuisa cod lol ini ndinofunga ndichaifarira zvakanyanya. Ini ndinotora chinyorwa chakanaka, ini ndichakuudza kuti zviri sei.
hahaha, kuwanda kukuru, hahaha, edza zvakanaka cod, uye utiudze, ndinofunga iyi recipe inogona kugamuchira shanduko dzatinoona dzakakodzera mhando yemidziyo yatinoshandisa kumba.
Mune yangu ndeyekuti cod haisi mutendi wekuzvipira kwedu, uye kunyangwe ichidonha, neiyo diki, ini handidi kupedza husiku ndichiipa mvura, hahaha.
Kutaridzika kwakanaka uko ... Tichazviedza tiri kumba uye ini ndichakuudza.
Iyi yekubheka ndeimwe yeayo andinoda, nekukurumidza uye nepine yakanaka kwazvo.
Nezuro ndakaona recipe yako uye sezvo ndaive nemidziyo yese pamba ndakaigadzira. Takazvifarira chaizvo. Ndatenda zvikuru nekuda kwekunakidzwa kwakawanda
Mhoro MErche, ndinofara kwazvo kuti wakazvifarira mumba mako, uye kuti wakazviitawo nekukasira.
Ndiri kuzoyedza nekukurumidza, ndinofunga ini ndinorambawo cod, ini ndinokuudza kuti sei, sezvo nguva pfupi yapfuura ndiri kuedza zvese zvaunotiudza… Ndinoenda pairi ndokuudza.
Pindura kuna LOURDES
Mhoroi maIshe, kana muchizviita, tiudzei…. Uye zvakare inotarisa kuti mamwe mabikirwo…. Shuwiro yakanakisa…
Maria Jesu akadaro
Inotaridzika kunge yakanaka. Ini ndangotenga hake uye ndiri kuzogadzirira.
Pindura kuna Maria Jesu
Mhoro Maria Jesu. Usakanganwa kutiudza kuti zvaive sei….
Mhoro, yakakura nzira, ndinofunga kuti nesalmoni zvingave zvakanaka, handiti? Uye zvinoitika kwandiri kuti iyi resipi inogona zvakare kutora mukana wehove dzatakasiya, iwe unofungei nezve zano? Kwaziso
Mhoro M. Carmen, kuchinja chinongedzo ndiko kunakidza kumutengi, hahaha, kune nyasha.
uye kutora mukana wehove kunoshamisa. ndozvandakaita vhiki rino. Ndakagadzirira kununurwa muto uye nehove, ndakaupwanya uye nekeke. Zvandinokurudzira kana hove isiri mbishi, dzikisa nguva yekubheka zvishoma.
Hunhu hwakanaka hwakanakisa uye hunoshanda ruzivo, maita basa !!! 😉
Mhoro Carmen, ndiri kufara kwazvo kuti unoifarira.
Kunaka keke rinonaka !!! Ndinofanira kuzviita!
Mhoro Piluka, kana wadaro, tiudze….
NDAKAGADZIRA RISIPO SEZVIRI uye NDINOGONA KUTI NDAKADA, SUPER SOFT uye FAST KUGADZIRA, NDINE MWANASIKANA WEMAKORE 7-ANODA ANODA HOSI YAKAWANDA NDINOGONA KUTI IYI RECIPE INOMUDA, SIMPLE I Usakahadzika KUTI NEKODI ZVINOGONESESA, NDICHAZVIEDZA. KUKURUDZIRA BHUKU RAKO, ZVINondIBATSIRA ZVAKAWANDA KUTI USADZOKE ZVIDZIDZO
Mhoro YUrena, anofara sei mazwi ako. Uye kuva nemwana anofarira hove chikomborero kuitira kuti asazoneta zvakanaka kuisa murume uyu pamabikirwo, kuitira kuti vaone kuti hove inogona kunakidza kwazvo.
Paunoyedza cod, zvinoverengeka.
Ndakutevera kwenguva yakareba. Rinenge gore. Ndinokuda uye ndinokukurudzira kune wese munhu. Ndiri kugadzira iyi recipe izvozvi. Chinhu chekutanga kukugamuchira iwe Vhutu, ndinovimba unoramba uchitumira akawanda mapfumi mapapiro. Uyu anotaridzika zvakanaka kwazvo, kunyange ndichireurura kuti inguva yekutanga kuti nditsvage kugadzira keke yehove uye ndinotya kuti mhedzisiro yacho ichave yakaita sei. Ndinovimba mese munoifarira. Ndichakuudza. Ndatenda!!
Mhoro Carolina, ndinokutendai nekutitevera uye ndinokutendai nekugamuchirwa kwenyu.
Ndinofanira kureurura kuti iyi yaivewo keke rangu rekutanga rehove, hubby yangu haina kupihwa zvakanyanya kune ichi chikafu uye kunyanya hove, zvisinei iyi nzira iyi isingawanzo svondo yandisingagadzi.
Ndinovimba unoifarira, uye ndinovimba unotiudza kuti zvaive sei ...
Kwave kuri kubudirira kukuru. Izvo zvave zvakakwana uye murume wangu aizvida. Ini nemwanakomana wangu takaidya tichiedza nekuti zvinotipa mari yakawanda kuyedza zvinhu zvitsva, asi nekuda kwako ndiri kuzviwana, saka ndichazvidzokorora zvechokwadi. Ndatenda Hunhu, uye nenzira, kunyangwe ndanga ndichikutevera kwenguva yakareba, iyi ndiyo yekutanga yandakataura. Zvino zvandave kuziva kunyora apa, ini ndichataura kakawanda, hehehe. Kusveta !!
Carolina, ndiri kufara kwazvo. Iwe uchaona kuti zvishoma nezvishoma sei iwe unowana iwo kuravira kwekuita zvinhu zvitsva. Ini ndinonzwisisa kuti zvinokubhadharisa kuyedza zvinhu zvitsva, murume wangu akafanana, murombo ave kutojaira, res
Iwe unofanirwa kuitora nenzira inotevera, kuti kana tikasaedza zvinhu zvitsva tiri kushaya zvinhu zvakawanda.
Uye maererano nezvakataurwa, ramba wakadai, tinofara kuziva zvaunofunga uye kuti uripo.
Mhoro Hunhu: Ndinoda kubika uye ndakave neiyo thermomix kwenguva yakareba asi ndinofanira kutaura kuti handina kutora mukana wakawanda nazvo. Iye zvino ndipo pandiri kuita zvimwe zvinhu naye. Izvo hazvina kujekerwa kwandiri kana hove iri mbishi kana yakabikwa neimwe nzira, semuenzaniso yakabikwa. Ndinovimba unondipindura uye ndinokutenda zvikuru nekuda kweakawanda kwazvo mapheka anonaka. Zita rangu ndinonzi lola
Mhoro Lola, hake, ichichekwa uye ikabikwa kwemaminitsi makumi matatu, hazvidi kuti uibike kare, sezvo yaizonyanya kuoma. Ndinokutendai zvikuru nekutinyorera isu Lola uye nekutevera mabikirwo edu. Kunyangwe Virtudes isisashande pamwe muThermorecetas, iro rakasara timu rinokukurudzira kuti uwane zvakanyanyisa kubva muchina wako uye kuti urambe uchisiya isu makomendi. Tiri pano kune izvo zvaunoda. Kumbundira!
Ini ndango gadzira iyo yekubheka uye kusahadzika kwangu kuri kuti kana ichigona kubviswa muforoma, ndachiisa musilicone apple pie mold uye ikozvino ndave nayo muchoto.
Mhoro Fany, chokwadi ndechekuti ini handina kukwanisa kukuudza, zvinoita kwandiri kuti hazviite, kunyangwe dzimwe nguva mvura yainayo inoenderana nehove (chando, nezvimwewo) painobika inoburitsa imwe mvura.
Ini ndinozviita mu pyrex girazi mudziyo, uye zvinofamba mushe, hongu, zvakanangana nendiro.
Uchandiudza…. Ndinozviita mangwana, kamwe pasvondo zvakachengeteka mumba mangu ...
Kana isina kunyatsoumbika, uye zvakare yakasarudzika, ini ndinowedzera mafuta neparsley inoiswa kumagumo negariki diki, zvese zvakapwanyika ne blender uye zvinosiya kuravira kukuru, porbadlo, iwe uchandiudza.
Mhoro Fany, nhasi ndapa iko kwekupedzisira kubata kwaunotikurudzira, uye kwakanaka….
NDANGOGADZIRA IYI RECIPE YEMAZUVA UYE HAUFUNGIDZE HWEMA HWAKAKOMESA K KUNE MUMBA YANGU PAMUSORO PEKUVA KUNONOKA KUGADZIRA, NDINODA KUTI VANA VANGU VAUYA KUZODYA
Pindura kuna sandra
Mhoro MUBVUNZO WANGU NDINOGONA KUTI NDINOGONESA HAKE IYO MU TMX NDobva NDABHUKUZA? PAMUSORO PEDI UYE RENGUVA YAKAreba SEI? WAITA HAKO
Mhoro Clara, ini ndinokurudzira kuti iwe uigadzire neruoko nekuda kweminzwa ..., pamusoro pekucheka neiyo tmx, unogona kuva nehuremu.
Paula Leon Ruiz akadaro
Kufanana nemazuva ese (sezvo ini ndichivenga kubika) ini ndanga ndatozeza ndichifunga nezve zvekuita pakudya kwemanheru uye ini ndawana ino yakanaka nzira. Zvakanaka, ale, ndinofunga tanga tine chikafu chinonaka uye chine hutano nhasi. Ndatenda!!
Pindura Paula León Ruiz
Unogona here kutsiva kirimu yemukaka wakasviba? Ndatenda
Mhoro Blanca, ehe, hapana matambudziko 🙂
Ricotta uye almond cake
Orange custard ine chokoreti machipisi